Izahay dia lisitra fohy ho an'ny orinasa teknolojia avo lenta ao Taizhou amin'ny 2021!
Vao tsy ela akory izay, Tiantai Dingtian Packaging Co., Ltd. dia nisafidy anarana ho orinasa teknolojia avo lenta any Taizhou City ho an'ny 2021. Ireo vokatra vita amin'ny taratasy dia manana tombony azo amboarina sy azo averina. Ny fitaovana dia simba sy tia tontolo iainana.
Tantaran'ny fampandrosoana ny indostrian'ny famolavola pulpa any Shina
Ny indostrian'ny famolavolana pulp dia nivoatra nandritra ny 80 taona mahery tany amin'ny firenena mandroso sasany. Amin'izao fotoana izao, ny indostrian'ny famolavola pulp dia manana refy lehibe any Canada, Etazonia, Britain, France, Denmark, Netherlands, Japan, Islandy, Singapore ary firenena hafa. Anisan'izany, Brita ...
Inona avy ireo toetra mampiavaka ny vokatra lovia taratasy finday?
Miaraka amin'ny fivoaran'ny fiaraha-monina sy ny fandrosoan'ny fiaraha-monina dia mitaky fiarovana maitso sy tontolo iainana ny famokarana vokatra vita amin'ny taratasy taratasy finday, noho izany dia manana ny toetran'ny vokatra manaraka izy: 2. Tsy hanao ...
Inona no atao hoe pulp tray?
Fantsona pulp dia singa fonosana mahomby novokarin'ny pulp. Ny vokatra vita amin'ny pulp vita amin'ny bobongolo dia vita amin'ny alàlan'ny fampihenana ny taratasy fako ho pulp. Ny fizotrany dia misy fampidirana fanamafisam-peo isan-karazany. Ny bobongolo porous dia alentika ao anaty pulp ary ny rano dia alaina avy amin'ny pulp amin'ny alàlan'ny fantsom-bava mahery. ...
Ny orinasanay dia nitombo tao amin'ny indostrian'ny vokatra famolavola pulp nandritra ny 6 taona, nandritra izay nandrosoana lehibe. Manokana, vokatra azo amina tontolo iainana fonosana sy latabatra azo ampiasaina amin'ny tontolo iainana no be mpampiasa, saingy mbola betsaka ny fetrany amin'ny ...
Ny famokarana Pulp bobongolo ankapobeny dia misy fanomanana pulp, famolavolana, fanamainana, fanerena mafana ary fomba hafa. 1. Fanomanana pulp Ny pulping dia misy ny dingana telo amin'ny fitrandrahana akora, fikapohana ary fikapohana. Voalohany, ny fibre voalohany dia dredged ao amin'ny pulp aorian'ny fisavana sy ny classifi ...
Box Mf kosmetika, Pulp Cup Holder, Fandokoana fonosana fonosana fandokoana, Fako Pulp voaoloko, Boaty fonosana sakafo, Fonosana sakafo boaty baoritra,